प्रेमीहरुको दिन - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2021-01 > प्रेमीहरूको दिन
भ्यालेन्टाइन डे - प्रेमीहरूको दिन
प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी १th तारिख, संसारभरिका प्रेमीहरूले एक अर्कालाई दिगो प्रेमको घोषणा गर्छन्। यस दिनको चलन सेन्ट भ्यालेन्टिनसको चाडमा फिर्ता जान्छ, पोप गिलासियसले 14 469 in मा सम्पूर्ण चर्चको सम्झनाको दिनको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। धेरै मानिसहरू यो दिन कसैको लागि आफ्नो स्नेह व्यक्त गर्न प्रयोग गर्दछन्।
हामी बीचमा धेरै रोमान्टिक कविताहरू लेख्छन् र उनीहरूको प्रियको लागि गीत बजाउँछन् वा उनीहरूले यस दिन हृदय-आकारको मिठाइहरू दिन्छन्। प्रेम व्यक्त गर्न धेरै योजना लिन्छ र मूल्यमा आउँछ। यी विचारहरूलाई दिमागमा राख्दै, मैले परमेश्वर र हामीप्रतिको उहाँको प्रेमको बारेमा सोच्न थालें।
अर्कीडको ब्रह्माण्ड आकाशगंगा र निर्दोष जटिलताहरू सृजना गर्नेले स्वेच्छाले आफ्नो आकार, प्रसिद्धि र शक्ति त्यागेर पृथ्वीमा हामीमध्ये एक जना मानव भएर हामीसँग हुनेछौं। यो बुझ्न हामीलाई लगभग असम्भव छ।
हामीजस्तै, येशू चिसोको चिसो रातमा स्थिर र गर्मी मा चिसो गर्मी सहन। उसको वरिपरिको कष्ट देखेर उसको गालामा बगाएको आँसु हाम्रो जस्तो वास्तविक थियो। अनुहारमा यी भिजेको निशानहरू संभवतः उनको मानवता को सबैभन्दा प्रभावशाली संकेत हो।
यस्तो उच्च मूल्यको लागि किन?
यो सबै माथि शीर्ष, उहाँ स्वेच्छाले क्रूसमा टाँगियो। तर किन यो सबैभन्दा क्रुर प्रकारको क्रियान्वयन मानिसद्वारा आविष्कार भएको हो? उसलाई तालिम दिने सिपाहीहरूले कुटे, जसले उसलाई क्रूसमा टाँगेर गाली गरे र गिल्ला गरे। के यो साँच्चै उहाँको टाउकोमा काँडाको मुकुट थिच्न आवश्यक थियो? किन तिनीहरूले उहाँलाई थुक्नुभयो? किन यस्तो अपमान? के तपाईं ठूलो पीठो ना nails्गो आफ्नो शरीरमा चलाइएको थियो जब पीडा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? वा जब ऊ कमजोर भयो र पीडा असहनीय थियो? जब उनी सास फेर्न सक्दैनन् असाध्यै आत्तिन्छ - अकल्पनीय। स्पन्जले सिरकामा भिजायो कि उसले आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समय अघि प्राप्त गर्यो - ऊ किन आफ्नो प्रिय छोरोको मृत्यु प्रक्रियामा भाग थियो? तब अविश्वसनीय हुन्छ: पुत्रसँग पूर्ण स्थायी सम्बन्धमा रहेका पिताले हाम्रो पापलाई ग्रहण गर्दा उहाँ उहाँबाट तर्नुभयो।
हामीप्रति उहाँको प्रेम देखाउन र परमेश्वरसँगको हाम्रो पाप भाँचिएको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। लगभग २००० वर्ष अघि हामीले गोलगोठाको डाँडामा भएको सबैभन्दा ठूलो प्रेम उपहार पायौं। जब येशू मर्नुभयो तब हामी मानिसहरुको बारेमा सोच्दछौं र यही प्रेमले उसलाई सबै घिनलाग्दा कामहरु सहन सहयोग पुर्‍यायो। यस घडीमा येशूले भोग्नु भएको सबै पीडाको साथ, म उहाँलाई कडा स्वरले फुसफुसाएको कल्पना गर्दछु: «म यी सबै मात्र तपाईको लागि गर्छु! म तिमीलाई माया गर्छु!"
अर्को पटक जब तपाइँ प्रेमले वा भ्यालेन्टाइन डेमा एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ, आफैलाई सम्झाउनुहोस् कि तपाईंको लागि परमेश्वरको प्रेमको कुनै सीमा छैन। उसले त्यस दिनको भयावह अवस्थालाई सहयो, ताकि त्यसले तपाईंसँग सदाको लागि बिताउन सकोस्।
जे होस् भ्यालेन्टाईन डे कसैप्रति आफ्नो प्रेम देखाउनको लागि लोकप्रिय दिन हो, म पक्का छु कि प्रेमको सबैभन्दा ठूलो दिन भनेको जब हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो।